Takariva iny lalao ho an'ny ankizivavy - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
takariva iny lalao
Bella indray mandeha dia nahita zatovo, tsara tarehy, fa hatsatra tovolahy izay tsy nahajanona ny masoandro. Dia hafahafa ihany nifandray tamin'ny fianakaviany, ny fisorohana ny fifandraisana amin'ny mpiara-mianatra hafa. No anarany Edward Cullen, ary izy koa Nisarika ny saina ho Bella. Ny tantaram-pitiavana iray vampira sy ny mety maty naniraka hevitra mifanohitra amin'ny olona, ​​vampira sy werewolves. Fa maharitra ho hiara, maimaim-poana amin'ny aterineto lalao takariva iny ka misokatra amin'ny rehetra, ny hilalao-kafa ny fitiavana sy ny fifanorohana, miezaka mba hampifaliana ny maso ny olon-kafa, na mahary ny endriny noho ny fanampian'ny ny akanjo sy ny ho-maso sy nandoko ny piozila.
Lalao Hariva tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra takariva iny lalao
Takariva iny: Zavatra tsy Taratasy
Takariva iny: vampira Bella Swan tao amin'ny mpitsabo nify
Fanakona-masoandro ny takariva iny
Ny maizimaizina Saga
Mafana ny maizimaizina Saga Dawn nanoroka-2
Takariva iny ka Wedding
Tsoahy takariva iny
Wedding: takariva iny
Takariva iny: Puzzles
Mafana ny maizimaizina Saga Dawn - Puzzles
Takariva iny: Ve?
Taylor Lautner: Makeup
Dress an'i Jakoba
Nanoroka Bella sy Edward
Manangona Groove takariva iny ka Saga: New Moon
Dress takariva iny ka mandarina
Takariva iny ka New Moon
Ny mpivady ny takariva
Takariva iny ka Saga - fanakona-masoandro. Isa miafina
Takariva iny ka Oroka
Robert Pattinson takariva iny
Makeup ny takariva
Picture ny takariva
Vampire Couple: Love oroka
Hariva. Very taratasy
Triangle raha vao nihamaizina
Takariva iny ka mpivady - lamaody vaovao
Takariva iny ka Kiss - Eclipse
Saga ny maizimaizina Wedding
Famous Mpivady 5
Takariva iny ka Dress Up
Takariva iny ka Saga Suarez
Manoroka takariva iny
Hariva fanontana manokana. Bella sy Edward
Edward vs. Jakoba. Matches
Puzzles takariva iny
Takariva iny ka Vampire Makeup
Takariva iny akanjo
Takariva iny: Star Nails
Moon raha vao nihamaizina: Puzzles
Edward vs. Jakoba
Edward vs. Jakoba: TIC-Tac-Toe
Hariva. Mba hitady ny fo
Fun amin'ny Edward
Mosaic: takariva iny
Saga takariva iny: Ireo rehetra izay iray
Takariva iny ka Ping pong
Makiazy ny Bella sy Edward
Soratsoratan'ny Hanketo: takariva iny
Takariva iny: Tadiavo ny isan'ny
Taylor Lautner: Dress
Farany takariva iny lalao
Rehefa avy nandinika tantara mitohy amin'ny fahitalavitra, ankehitriny ianao dia afaka milalao an-tserasera ao amin'ny takariva, izay endri-tsoratra ny toerana tena hahafaly antsika foana
Lalao Online Rehetra Takariva iny lalao ho an'ny ankizivavy
milalao ny mahery fo ny malaza resabe iny
Stephenie Meyer nanao fahagagana tokoa, manoratra tantara malaza « maizimaizina ». Izany no fomba voalohany vehivavy fitiavana toa avy ao anatiny. Raha misy ankizivavy mandresy ny vato misakana ivelany toetra, nijanona teo an-dalana ny ny fihetseham-pony, toy ny ataon'ny Bell, dia lasa matanjaka kokoa, tsy mitsaha-mitombo tahaka ny olona traikefa ady tombony toe-javatra.
Ny mpanoratra Amerikana Stephenie Meyer no namorona ny andian-tantara « maizimaizina », izay mamaritra ny tantaram-pitiavana ny ankizivavy iray Bella sy ny vampira Edward. Miorina amin'ny asa ireo dia voarakitra an-tsary vitsivitsy lasa malaza eto amin'izao tontolo izao ny Hollywood sarimihetsika, ary avy eo dia nentina tany amin'ny tetika ny lalao takariva iny ihany, mikendry indrindra indrindra amin'ny ankizivavy. Matetika, dia asaina mba haka akanjo ho an'ny Mpandray anjara, izay mampiseho ny mpilalao Kristen Stewart sy Robert Pattinson. Afaka miasa manokana – ohatra, misy lalao izay misolo tena ihany Bella. Eto tsy tapaka mifidy ho an'ny rehetra ny fomba tsara tarehy antsipirihany:
Mahatsapa toy ny tena stylist sarimihetsika, fa:
ampiharina amin'ny Kristen Stewart samihafa matoatoa va ny lokomena, maso aloka sy ny mena
mba hanova ny lokon'ny ny hodiny sy ny masony, halavan'ny volo sy ny fomba styling
Ny tarehin'ny ankizivavy afaka niova be ny makiazy anao ireo, izay mamela ny lalao iray ihany mba hamoronana sary maro, miezaka ny handeha eo amin'ny lafin-mahery fo ny fihetseham-po isan-karazany. Raha ny lalao atao amin'ny karazana ny hatsaran-tarehy, akanjo safidy dia mety ho tena voafetra – vitsivitsy ihany bluzochek, roa satroka. Fa raha izany kosa hamboatra ny zavatra avy amin'ny tolo-kevitra isan-karazany afaka mandeha manodidina ny lohan'ny na dia ny tena Kristen Stewart. Misy:
izy ireo dia mety ho samy hafa Mamboatra, fanatontosana vaovao tanteraka karazana toerana tena maherifo.
Misy fandikan-ny ny lalao maizimaizina
Matetika ny vampira Edward no tafiditra amin'ny maro ny lalao niaraka tamin'ny malalany Bella. Izy ireo, ohatra, dia afaka mijery Nankafizinay koa samy maso sy hanomana ho tia oroka. Na dia amin'izao fotoana izao dia sarotra amin'ny miahy ny endriky ny volo, fitafiana na firavaka, ianao no mbola handray ny andraikitry ny mpamorona sy ny niara-niasa hatrany tamin'ny sary ny tovolahy sy ny tovovavy. Ary rehefa nahavita ianao, dia afaka ny famoronana mahafinaritra eo amin'ny fototra ny samy hafa ny endriky ny.
Misy lalao ao izay mila akanjo sy handravaka ny tsara tarehy ihany Robert. Dia mijoro eo ny atin'akanjo sy miandry rehefa hitafy izany ho stylish akanjo mamirapiratra amin'ny tie, kanto ny kiraro, manao tsara taovolony. Toy ny tena lehilahy, Robert tsy mazàna no hanome lanja fohy ny plurality ny fitaovana, ary matetika izany no mahavoky manana afa-tsy Sunglasses.
Lalao ho an'ny ankizivavy takariva iny ka namorona mpandray anjara hafa ao amin'ny horonan-tsary. Ohatra, ny werewolf Jakob ihany koa ny fampiharana ny Bella ny fo. Misy ihany koa ny lalao ny sarimihetsika takariva iny ihany, atao amin'ny karazan-dahatsoratra hafa – ohatra, karohy ny zavatra miafina ao amin'ny zana-kazo amin'ny horonan-tsary, ny tena ravaka ny efitrano mpilalao manoroka mpankafy lalao. Top lalao mifototra amin'ny tantara ny sarimihetsika takariva iny ihany, no nangonina ho anao ato amin'ity fizarana ity ny toerana!